11 Faa'iidooyinka caafimaad ee Kaabisyada Resveratrol - Wisdompowder
11 Faa'iidooyinka caafimaad ee Kaabista Resveratrol
Resveratrol waa xarun dabiici ah polyphenol oo u shaqeysa sidii antioxidant. Ilaha Resveratrol waxaa ka mid ah khamri cas, canab, berry, lawska, iyo shukulaatada madow. Xaruntani waxay umuuqataa inay si aad ah isugu urursan tahay iniinyaha iyo maqaarka miraha iyo canabka. Seeds iyo haragyada canabka waxaa lagu dhajiyaa halsano khamriga resveratrol, waana sababta khamriga cas uu ugu badan yahay resveratrol. Isticmaalka Resveratrol ee caafimaadka iyo caafimaadka waxaa ka mid ah maareynta caqabado badan oo caafimaad oo la xiriira da'da, sida cudurka wadnaha, cudurka Alzheimers, cudurka macaanka, iyo kansarka.
Sidee ayay Resveratrol u shaqeysaa?
Resveratrol waxay shaqeysaa iyadoo la ilaalinayo DNA ee unugyadayada. Waxaa la rumeysan yahay inay tahay mid ka mid ah antioxidants-ka ugu awoodda badan. Antioxidants waxay ku shaqeysaa iyagoo gacan ka geysanaya kahortaga waxyeelada unugyada ee guud ahaan ay sababaan xag-jirka. Xagjirnimada bilaashka ah ayaa ah unugyo aan degganeyn oo ay ka dhashaan iftiinka qorraxda, wasakhowga, iyo dufanka dabiiciga ah ee jirkeenna u horseedi kara xumaanshaha maskaxda, kansarka, iyo gabowga.
11 Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Kaabayaasha Resveratrol
1. Kaabayaasha Resveratrol waxay wanaajisaa Caafimaadka Wadnahaaga
Daraasad cilmi baaris ah oo la diiwaangeliyay 2015, saynisyahano ayaa falanqeeyay 6 daraasadood oo horey loo diiwaangeliyay saamaynta resveratrol ku saabsan cadaadiska dhiigga ee systolic wuxuuna ku soo gabagabeeyey qiyaasta daawada resveratrol oo sareysa (oo ka sarreysa 150 mg maalin kasta) si weyn hoos ugu dhigeysa cadaadiska dhiigga systolic.
Cadaadiska dhiiga ee Systolic wuxuu caadi ahaan kordhaa da 'ahaan, sababtoo ah xididdada ayaa adkaanaya. Markay aad u sarrayso, waxay halis weyn ugu jirtaa cudurka wadnaha.
Resveratrol ayaa la rumeysan yahay inay ku guuleysato saameynta dhiig-karka-yareynta iyadoo dhiirrigelineysa wax soo saarka nitric oxide badan. Nitric acid, ayaa isna, sabab u ah nasashada xididdada dhiigga.
2. Resveratrol Waxay Xakameysaa Dufanka Dhiigga Jid Wanaagsan leh
Cilmi-baarista lagu sameeyay xayawaanku waxay soo jeedinaysaa in resveratrol ay saameyn togan ku yeelan karto dufanka dhiigga. Daraasad la sameeyay 2016 waxay siisay jiirka cunnooyinka hodanka ku ah baruurta polyunsaturated and protein. Waxay sidoo kale siiyeen jiirka nafaqeynta supveratrol. Seynisyahannadu waxay ogaadeen in miisaanka jirka iyo heerarka kolestaroolka ee jiirka ay hoos u dhaceen, iyo heerarka kolestaroolkooda "wanaagsan" ayaa kordhay.
Resveratrol wuxuu saameyn ku yeelan karaa heerarka kolestaroolka isagoo hoos u dhigaya saameynta enzymisyada xakameynaya soosaarka xun ee kolestaroolka. Waxa kale oo laga yaabaa inay hoos u dhigto oksidaha kolestaroolka LDL iyadoo ay ugu wacan tahay awoodeeda antioxidant.
Maxkamad, kaqeybgalayaashu waxay soo qaateen goos goos ah oo lagu sii xoojiyay budada resveratrol. Daaweynta kadib 6 bilood, kolostarolkooda LDL ayaa hoos udhacay boqolkiiba 4.5, iyo kolesteroolka ay ka kooban tahay maadada 'oxidized' waxaa lagu yareeyay in ka badan 20 boqolkiiba marka loo barbardhigo kooxda kantaroolka ee qaaday soosaarka canab ee aan lagu xoojinin resveratrol ama placebo.
3. Kordhinta Kaydinta May Xannibaadda Hay
Qaar ka mid ah tijaabooyinka kiliinikada ayaa soo jeedinaya in tuubada sanka ay ku yareeyaan calaamadaha xasaasiyadda xasaasiyadda ama xasaasiyadda cawska. Baarayaasha waxay isticmaaleen buufin sanka si ay uga gudbaan bioav adịla'aanta resveratrol, taasoo la micno ah inay si toos ah ugu riixeen aagagga gaarka ah ee dhibaatada leh.
Daraasad ku lug leh 100 kaqeybgaleyaal, buufis intranasal ah oo leh 0.1% resveratrol ayaa loo isticmaalay 3 jeer maalintiiba muddo afar toddobaad ah hoos u dhaca astaamaha sanka iyo tayada nolosha oo kor loo qaaday bukaannada qaba qandho.
Baadhitaan kale oo caafimaad oo ay ku jiraan 68 caruur ah oo qaba qandho ubax leh, 0.05 boqolkiiba resveratrol intranasal buufis, iyo beta-glucan 0.33% hagaajinta sanka oo xirma, cuncun, san duuf leh, iyo hindhiso. Tani waxaa la siinayay saddex jeer maalintii muddo laba bilood ah.
4. Resveratrol Reliefs Wadajirka Xanuunka
Arthritis-ku waa xaalad fudud oo horseedda isu-socodka dhaqdhaqaaqa iyo xanuunka laabatada. Marka daawada loo yaqaan 'resveratrol' loo isticmaalo dawo ahaan, waxay si weyn u caawin kartaa kahortaga sii xumaanshaha cudurka carjawda. Jabitaanka carjawdu waxay sababi kartaa xanuun ku dhaca kala-goysyada waana mid ka mid ah astaamaha ugu weyn ee arthritis.
Daraasad, the resveratrol dheeri ah ayaa lagu duray kala-goysyada jilibka ee bakaylaha la xanuunsanaya arthritis-ka waxayna ogaadeen in bakaylahaasi ay muujiyeen waxyeello yar xagga carjawda bakayle.
Daraasad dheeri ah oo xayawaan iyo tijaabooyin tuubbo-tijaabo ah ayaa muujiyay in 'resveratrol' ay yareyn karto caabuqa isla markaana ay ka difaaci karto waxyeelada xubnaha.
5. Resveratrol Saameynta Kahortaga Kansarka
Dhowr daraasadood oo cilmi baaris ayaa muujinaya in resveratrol ay lahaan karto waxyeelo ka hortagga kansarka. Tusaale ahaan, daraasad xayawaan lagu sameeyay 2016, resveratrol waxay hoos u dhigtay dib u soo kicinta buro ugxan-sidaha kemotherabi. Daraasadda la daabacay waxay xaqiiqsatay in resveratrol ay xannibtay qaadashada gulukooska ee unugyada kansarka (inta badan unugyada kansarku waxay u isticmaalaan gulukooska sida isha tamar).
6. Difaaca Antioxidant
Baarayaasha waxay aaminsanyihiin in resveratrol uu leeyahay labo jibaar antioxidant firfircoonida taasi waxay u dhaqmeysaa sidii xarun sare u qaadeysa hiddo-wadayaasha kale ee antioxidant-ka, enzymes-ka, iyo wadiiqooyinka loo maro iyo sidii sunta tooska ah.
Cudurka bararka iyo walaaca kaabayaasha ayaa ka sii dara ama kiciya dhowr cudur oo ka yimaada sonkorowga iyo cudurka wadnaha illaa hoos u dhaca garashada iyo kansarka. Resveratrol dheeri ah ayaa kordhisay enzymes-ka antioxidant, cilmiga xayawaanka iyo unugyada, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
SIRT iyo Sirtuins enzymes-yada difaaca borotiinka isla markaana dami hiddo-wadayaasha la xiriira da'da
NRF2 iyo SOD, kuwaas oo ah qaybaha aasaasiga u ah difaaca antioxidant iyo detox hub.
Heme-oxygenase 1 oo jebiya haemoglobin-ka-dhiig illaa dabadeed bir iyo sunta ka hortaga
Katalase oo naga celisa waxyeelada sunta keena
Daraasadaha xaddidan ayaa sidoo kale muujinaya in resveratrol ay yareyso walxaha caabuqa iyo xagjirnimada lacag la’aan ah.
7. Resveratrol Dib-u-hagaajinta Caafimaadka Maqaarka
Daraasad cilmi baaris caafimaad oo ay ku lug lahaayeen 20 kaqeybgale oo qaba finanka, resveratrol gel ayaa ku bixiyay natiijooyin wanaagsan laba bilood gudahood. Waxay hoos u dhigtay darnaanta nabarrada kudhowaad 70 boqolkiiba waxayna kor u qaadday caafimaadka guud ee maqaarka in ka badan 50 boqolkiiba oo aan lahayn waxyeellooyin. Qalabka loo yaqaan 'Resveratrol q10 moisturizer' ayaa sidoo kale la cadeeyay inuu yahay xalka ugu fiican ee gabowga gabowga, qallalka, jilicsan, iyo maqaarka jajaban. Saynisyahannadu waxay kaloo ogaadeen in alaabada qurxinta ee lagu xoojiyay resveratrol aysan hoos u dhicin oo ay xasilloon yihiin markii lagu haayo qaboojiyaha (heerkulkiisu yahay 40 ° F / 4 ° C).
8. Xakamaynta Sonkorta Dhiigga
Hal baaris ayaa lagu ogaadey in resveratrol ay ka caawiso dheef-shiid kiimikaadka gulukooska. Kow iyo toban qof buuran laakiin caafimaad qab ah, resveratrol (150 mg 24 saac oo kasta) ayaa la helay si kor loogu qaado dareenka insulin isla markaana uu hoos u dhigo heerka sonkorta dhiigga bil ka dib.
Waxay sidoo kale kordhisay heerarka PGC-1a iyo SIRT1. SIRT waa enzyme muhiim u ah "daminta" hidda-wadayaasha waxyeellada leh, kuwaas oo kordhiya caabuq, dufanka lagu keydiyo, iyo sonkorta dhiigga ee jirka ku jirta. Isla mar ahaantaana, PGC-1a wuxuu u shaqeeyaa si loo hubiyo in mitokondria ay caafimaad ahaato.
Resveratrol wuxuu yareeyay sonkorta dhiiga ee baaritaanka jiirka sonkorowga. Waxay kicisaa unugyada si ay u cunaan gulukoos badan, taas oo hoos u dhigta caabbinta insulin-ta. Soosaarka Resveratrol wuxuu kaloo ilaaliyaa unugyada beta ee insulin-ta qarsoon kujira xammeetida. Tani waxay awood u siineysaa unugyada inay kor u qaadaan heerka insulin-ta markay hoos u dhacaan isla markaana hoos u dhigaan markay aad u sarreeyaan.
Marka loo eego daraasad gaar ah, suppleratrol supplements waxay kaa caawin kartaa isku dheelitirka jawaabta estrogen-ka. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadka taranka dumarka iyo ragga labadaba.
Jiirka labka ah, resveratrol waxay kor u qaadday tirada taranka ragga iyo testosterone iyada oo aan wax saameyn xun ah yeelan. Baarayaasha sidoo kale waxay moodayaan inay kicin karto hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG), oo xakameysa sii deynta hoormoonka jinsiga ee hypothalamus iyadoo loo marayo maskaxda maskaxda.
Resveratrol waxay udhaqantay si ka duwan dumarka. Hal daraasad, 40 haween ah oo ah dhalmo-dayska kadib waxaa lasiiyay resveratrol (1g maalintiiba muddo seddex bilood ah). Resveratrol ma saameynin testosterone ama estrogen laakiin wuxuu xoojiyay borotiinka, kaas oo xira hormoonnada galmada wuxuuna ku gudbiyaa dhiigga boqolkiiba 10. Waxay kaloo kobcisaa dheef-shiid kiimikaadka estrogen, oo yareyn kara halista kansarka naasaha.
Resveratrol waxay xakameysaa aromatase enzyme, kaas oo soo saarta estrogen xayawaanka isla markaana si tartiib tartiib ah u kiciya kuwa qaata estrogen-ka. Walxaha 'Resveratrol molecule' waxay ku xirayaan kuwa qaata estrogen-ka hab aad uga liita sida estrogen-ka u leeyahay. Tani waxay leedahay saameyn dheellitiran taas oo laga yaabo inay gacan ka gaysato kor u qaadista ficil-sida estrogen-ka ah marka heerka hoormoonka galmada dhedigu uu hooseeyo (laga yaabee menopause-ka ka dib) ama hoos u dhigo marka ay si aan caadi ahayn u sarreyso.
10. Resveratrol waxay ilaalisaa maskaxdaada
Daraasado kala duwan ayaa muujiyey in cabitaanka khamriga cas ay kaa caawin karto yareynta hoos u dhaca ku yimaadda xagga garashada garashada ee da'da ku xiran. Tani waxay u sabab noqon kartaa ficil-celinta anti-bararka iyo antioxidant-ka ee resveratrol. Xaruntani waxay u egtahay inay farageliso jajabyada borotiinka ee loo yaqaan 'beta-amyloids', oo ka qaybqaata sameynta calaamadaha, kuwaas oo ah astaamaha AD (Cudurka Alzheimers).
Sidoo kale, waxay ku dhaqaajin kartaa silsilado dhacdooyin ah oo ka hor istaagaya unugyada maskaxda inay ka soo gaaraan wixii suurogal ah.
11. Isticmaalka Resveratrol-ka Ee Maareynta Cayilnaanta
Waxaa jira caddayn caafimaad oo yar oo taageerta codsiga resveratrol ee bukaannada la halgamaya xaaladaha buurnida la xiriira. Daraasadaha xoolaha ee jira, si kastaba ha noqotee, waxay muujinayaan in resveratrol laga yaabo inay saameyn togan ku yeelato dadka la halgamaya cayilka.
Daraasad gaar ah, jiirka waxaa lagu quudin jiray cunno dufanka badan iyo kaydka 'resveratrol'. Dheeraadka ayaa hoos u dhigay culeyska kaabista jirka wuxuuna ka ilaaliyay jiirka ka horjoogsashada dhimashada suurtagalka ah ee unugyada loo yaqaan Tregs (unugyada difaaca jirka).
Resveratrol ayaa sidoo kale ka horjoogsatay unugyada dufanka inay soo saaraan dufanka cusub waxayna ku dhaqaaqday geerida unugyada baruurta ee daraasad ku saleysan unugyada. Waxay taas ku sameysay iyada oo damiaysa hiddo-wadayaasha PPAR gamma, kuwaas oo sababa culeyska korodhka halka ay ku shaqeynayaan hiddo-wadayaasha UCP1 iyo SIRT3, kuwaas oo xoojiya caafimaadka mitochondrial iyo isticmaalka tamarta.
Resveratrol sidoo kale wey fiicnaan kartaa miisaanka oo yaraada iyadoo la xakameynayo enzymes-ka kala duwan ee keenaya dufanka ay ka midka yihiin libase-ka xasaasi u ah hoormoonka, aashitada isku-darka dufanka, iyo lipoprotein lipase. Markaa haddii aad raadinayso kabitaan kor u qaadi kara barnaamijkaaga miisaanka luminta, waxaad tixgelin kartaa iskudayida budada resveratrol.
Ma jiro qiyaasta resveratrol ee loo qoro. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris ayaa lagu soo gabagabeeyay in qiyaasta yar ee resveratrol ay ka hortageyso cuduro kala duwan. Dhinaca kale, qiyaaso aad u badan oo resveratrol ah ayaa waxyeelo u yeelan kara caafimaadka.
Saynisyahanadu waxay u isticmaaleen qiyaasaha resveratrol kala duwan daraasadooda. Tani waxay ku saleysan tahay qayb gaar ah oo cilmi baaris ah. Tusaale ahaan, cilmi baaris lagu baranayo sonkorowga iyo xiriirka resveratrol, 250 ilaa 1000mg maalin walba ayaa la maamuli jiray 12 toddobaad. Baadhisyo kala duwan oo ku saabsan doorka qaybtan ka ah maareynta qandhada hay, laba buufis 0.1% resveratrol sanka ah ayaa lagu buufiyay sanka kasta saddex jeer 24-kii saacadoodba hal bil. Qiyaastaasi waxay umuuqdeen inay bixiyeen natiijooyinka la filaayay.
Dhibaatooyinka Dhinacyada ee Resveratrol
Cilmi baaristu wali ma aysan soo bixin wax daran waxyeellooyinka dawooyinka xitaa qiyaasta sare. Qiyaasta daawada 'resveratrol' ee aadka u sarreysa ayaa, si kastaba ha noqotee, waxay la xiriirtay hoos u dhaca cadaadiska dhiigga, qandhada, iyo unugyada dhiigga oo yaraaday. Dadka qaarkii, qiyaasta sare u qaadashada dawada 'resveratrol' waxay sababi kartaa dhibaatooyinka kilyaha.
Waa maxay Daawooyinka Kale Waxay Saameyn Doonaan
Resveratrol waxay ka dhigeysaa in xirmooyinka dhiiga ku jira dhiiggaaga yareeyaan "dhejiska". Sidaa darteed, waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa halista dhiigbaxa haddii aad qaadatid warfarin (Coumadin), ibuprofen, clopidogrel (Plavix), asbiriin, ama dawooyin kale oo lidka ku ah anti-bararka.
Kabitaannada ugu Horeeya ee Daaweynta
Suppleratrol-ka ugu fiican waa inay kujiraan 100% resveratrol dabiiciga ah. Kordhinta waa inay bixiyaan 1000 mg oo ah resveratrol dabiiciga ah 24-kii saacadoodba mar markii la cuno laba jeer maalintii ie, 500mg kaabsal walba. Kordhinta waa in laga sameeyaa maqaarka canab gaduudan oo cas, berry, iyo miro guduud.
The suppleratrol-ka ugu fiican waa inaysan ku jirin xirxirayaal aan loo baahnayn, buuxiyo, ama walxaha waxyeellada u leh waxyeelada ama GMOs. Xarumaha wax soo saarka ee dheeraadka ahi waa inay ahaadaan kuwo GMP waafaqsan. Soosaarayaasha qaar ayaa sidoo kale bixiya isku darka lacagta 'resveratrol premium', oo ka kooban soosaarida shaaha cagaaran, soosaarida abuurka canabka, trans-resveratrol, vitamin c, soosaarka buluugga, soosaarka rummaanka, iyo soosaarida acai.
1] Waqtileyda S., Konings E., Bilet L, et al. Xaddididda Calorie-sida Saamiyada 30ka maalmood ee Kordhinta Dib-u-kaydinta ah ee Dheef-shiid kiimikaadka Tamarta iyo Taariikhda Dheef-shiid kiimikaadka ee Aadanaha. Dheef-shiid kiimikaadka Unugga 2011; 14: 612-622
Lamuela-Raventos RM, Romero-Perez AI, Waterhouse AL, de la Torre-Boronat MC; Romero-Perez; Aqalka biyaha; de la Torre-Boronat (1995). "Falanqaynta Tooska ah ee HPLC ee cis-iyo trans-Resveratrol iyo Piceid Isomers ee Isbaanishka Casaanka Vinas vinifera Wines." Joornaalka Cilmiga Beeraha iyo Cuntada. 43 (2): 281–283.
Prokop J, Abrman P, Seligson AL, Sovak M; Abrman; Seligson; Sovak (2006). "Resveratrol iyo glycon piceid waa polyphenols deggan." J Cuntada. 9 (1): 11–4
2.Sidee Resveratrol u shaqeysaa?
3.11 Faa'iidooyinka Caafimaad ee Kordhinta Resveratrol
5.Side Saamaynta Resveratrol
6.Waa Maxay Dawooyinka Kale Saamayn Doonaan Resveratrol
7.Kaabashada Resveratrol-ka ugu Fiican